KULMIYE Oo Ka Baxay Heshiiskii Xisbiyada, Taageerayna Go’aankii Guurtida, Goormuu Qabsanayaa Golihiisa Dhexe Yaase U Sharraxan? | FooreNews
Home wararka KULMIYE Oo Ka Baxay Heshiiskii Xisbiyada, Taageerayna Go’aankii Guurtida, Goormuu Qabsanayaa Golihiisa Dhexe Yaase U Sharraxan?
KULMIYE Oo Ka Baxay Heshiiskii Xisbiyada, Taageerayna Go’aankii Guurtida, Goormuu Qabsanayaa Golihiisa Dhexe Yaase U Sharraxan?
FoorenewsJun 29, 2015wararka0
“Haddii Caqabadaha Doorashada Ku Gudban Laga Wada Shaqayn Waayo Tanaa Laga Cabanayaaye Korodhsiimo Kale Ayaa Imanaysa”
Hargeysa (Foore)- Guddoomiyaha Golaha Dhexe ee xisbiga KULMIYE Md. Jaamac Ismaaciil Cige (Jaamac-Shabeel) ayaa sheegay in haddii xisbiyada iyo daneeyayaasha arrimaha doorashadu ka wada shaqayn waayaan caqabadaha ku gudban doorashada golaha wakiilada in la iska hadhi doono oo ay khasab noqon doonto muddo kordhin dambe oo dheeraad ah isaga oo caqabadaha doorashada dib u diray ku eedeeyey Guddoomiyaha xisbiga WADDANI ahna Guddoomiyaha Golaha wakiilada Md. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi. Jaamac Shabeel waxa uu sidoo kale ka hadlay wakhtiga ay qabsan doonaan shirkii Golaha Dhexe ee KULMIYE, cidda illaa imika Musharrax dhab ah u ah xisbiga KULMIYE haddii Madaxweyne Siilaanyo ka hadho tartanka, iyo arrimo kale waxaanu dhammaan arrimahaasi Jaamac Ismaaciil Cige (Jaamac-Shabeel) kaga hadlay waraysi uu siiyey shabakadda hadhwanaag. Isaga oo arrimahaa ka hadlaya waxa uu yidhi: “Laba arrimood ayaa la isku qaldaa oo u baahan in la kala fahmo. Waa dhab oo xukuumadda muddo kordhin ayaa loo sameeyey waxaana u samaysay Guurtida oo waa sharci tallaabadaasi. Waxaanay ka bilaabmi doontaa Bishan soo socota ee July. Bishaasi July wixii ka dambeeya waxa ay golayaasha Xukuumadda iyo Wakiiladu ku fadhiyi doonaan waa sharciyaddaa ay Golaha Guurtidu kordhiyeen. Cabdiraxmaan Cirro waxa uu Guddoomiyaha Golaha Wakiilada ku ahaan doonaa waa sharciyaddaasi Guurtidu qaadday ee samaysay. Axmed Siilaanyana sharciyaddaasi ayuu Madaxweyne ku siin ahaan doonaa. Sharciyaddaasi ma aha mid muran laga dhex dayo ama uu ku jiro. Waxa kale oo mudan in la fahmo. Haddii aanu nahay KULMIYE waxaanu heshiis la gallay labada xisbi Mucaarid. Waxaanu ahaa wakhtiga doorashada la qabanayo oo aanu isla qaadanay December 2016. Taasina ama wax u dhigma ama la barbar dhigi karo sharciyaddii dalka u taallay ee Guurtidu xaqa u lahayd. Farqiga u dhaxeeya in la fahmo ayaa loo baahan yahay oo ah laba bilood oo kali ah. Anagu waxaanu nidhi December, Guurtiduna waxay yidhaahdeen March, waxaana u dhaxeeya January iyo February waa labadaasi bilood. Labadoodabana waxa xaq u leh Komishanka”.
Jaamac Ismaaciil Cige (Jaamac-Shabeel) oo ka hadlaya aragtidiisa ku aaddan dib u dhaca doorashada iyo in ay muddo kordhin dambe iman karto waxa uu yidhi: “Mucaaridka haddii ay Doorasho, Doorasho, Doorasho uun kaga dhagto cajaladdu waxa ay gaadhi doontaa 2020 waxaabay ka cabanayaan 2016-kee. Waxa ka horreeya waxaasi oo dhan in la qabto qabyooyinka dib u dhigay qabsoomidda oo u baahan in laga wada shaqeeyo oo aan muran la galin. Anaga ka xisbi ahaan in doorashadu December noqoto iyo in ay March noqoto wax macno ah oo ay noo samaynaysaa ma jirto waxa noo muhiim ah hawlaha qabyada ah ee qabsoomidda doorashada caqabadda ku ah la dhammeeyo”.
Guddoomiyaha Golaha dhexe ee KULMIYE Jaamac Ismaaciil Cige (Jaamac-Shabeel) oo wax laga waydiiyey go’aankii Guurtida ee muddo kordhinta iyo heshiiskii uu la gaadhay xisbiyada siyaasadda ka ay taageersan yihiin ka xisbi ahaan ayaa ku jawaabay sidan: “Go’aanka Guurtidu waa xaq oo waa sharci ma jirto cid ka hor iman kartaa. Sharciga dalka u yaalla ninna laga baryi maayo taasaanu taageersan yahay. Haddii aanu shaqaysan karno oo qabyada ka baxno oo hawlaha doorashooyinka dhammaysan karno waa la soo qaddimi karaa doorashada wakhtigeeda. Haddii caqabadaha doorashada ku gudban laga wada shaqayn waayo tanaa laga cabanayaaye korodhsiimo kale ayaa imanaysa”.
Jaamac Ismaaciil Cige (Jaamac-Shabeel) oo ka hadlayay aragtidiisa ku aaddan taageerada KULMIYE haysto iyo shirkiisa Golaha dhexe iyo cidda u musharrax ah ayaa waxa uu yidhi: “Doorashada waxaan u arkaa in aan ka helayno Mucaaridka. Aroorta haddii ay dhacdo doorasho waxaan qabaa oo aan rumaysanahay in aan ka guulaysanayno. Waayo mucaarid adag ma arkayno. Markaa waxaanu korodhsiimo ama muddo kordhin uga baahanahay ma jirto. Dadku waxan ay doonayaan maan garan. Waayo madaxweynuhu waakii halkaa soo fadhiistay ee yidhi musharrax baan ahay. Wasiirrada ka soo hoos hadlay Madaxweynaha ee yidhi waanu sharraxanahay waa qaar jaha wareersan oo asqaysan. Nin wasiir ah oo yidhaa waxbaan doonayaa waa nin dawakhay oo xilka yar ee Madaxweynuhu u dhiibay ku dawakhay. Kaasi cidi waxba u diran mayso. Gobolada dalka oo dhanna waxaanu ka qabnaa kalsooni buuxda oo taageero waxaanan qabaa in KULMIYE kaalinta koowaad meel walba kaga soo bixi doono. Waxaanu ka qabnaa gobolada cod kii hore ka badan ayaan ka qabnaa in aanu ka helayno”. “Waxba ma dhawa. Ma cayimi karno wakhtigii uu qabsoomi lahaa golaha dhexe ee KULMIYE. Waxaan cayimi doonaa marka ay soo dhawaato. Shirka aad wax weyn ka dhigaysaa waa saacad kali ah balse wax badan oo kale ayaa ka horreeya ee hasoo dhawaado. Xisbiga KULMIYE waxa uu garanayaa cidda uu hor keenayo haddii Madaxweynuhu yidhaa ma taagni balse wali taasi ma qabno oo madaxweynaha ayaa ah Musharraxa xisbiga” ayuu hadalkiisa ku soo gunaanaday Jaamac Shabeel.
Previous PostXukuumad Ka Dhabaysay Ballan-Qaadyadii Ay Ummadda La Gashay! Next PostFaa'iidooyinka Caafimaad ee Ku Lammaan Xabxabka